UNHCR oo sheegtay in qaxooti badan ay ka soo qaxeen Cameroon – Radio Muqdisho
UNHCR oo sheegtay in qaxooti badan ay ka soo qaxeen Cameroon
Hay’ada Qaxootiga Aduunka ee UNHCR ayaa sheegtay in ay dardar galinayso howlaheeda xuduuda u dhaxaysa Cameroon iyo koonfur bari Nigeria.
Kumannaan Reer Cameroon ah ayaa ka qaxay isku dhacyo u dhaxeeya dowlada iyo kooxo u ololeeya xorriyad ay helaan gobolka ay ku nool yihiin dadka ku hadla luuqada Ingriiska.
Qaxooti kor u dhaafaya 7000 oo qof ayaa mar hore laga diiwaangaliyay dalka Nigeria tan iyo intii ay bilaabmeen isku dhacyada bishii october.
Balse Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in kumannaan kun oo kale ay sugayaan in la diiwaangaliyo.
Xiisada ayaa u muuqata in ay sii kordhayso ,xilli ay dowladda Cameroon ay sheegtay in 4 ka mid ah ciidamdeeda sida militariga u tababaran ay dileen maleeshiyaadka ka soo jeeda gobolka afka Ingriiska looga hadlo ee Camerooon.
Hay’ada qaxootiga aduunka ee UNHCR ayaa sheegtay in ay dardar galinayso qaabilaada qaxooti dhan 40,000 oo soo gaaraya dalka Nigeria.
Waa dhibaatadii qaxootiga ee labaad ee ka taagan xuduuda u dhaxeexaysa Cameroon iyo Nigeria.
Dadka ku nool gobolka looga hadlo afka Ingiriiska ee dalka Cameroon ayaa ah dad laga tiro badan yahay ,waxaana tan iyo xorriyadii halkaasi ka taagnayd xiisad iyada oo siyaasada ay ku badan yihiin dadka ku hadla afka faransiiska ee dalka Cameroon.
Balse isku dhacyadani ugu dambeeyay ayaa ah kuwii ugu xoogganaa ee halkaasi ka dhaca.
Xuska Sanad guurada Ciidamada Booliiska Soomaaliya oo maanta lagu qabanayo Muqdisho